Walitti ida'amuu qofaan Koroonaa moo'achuun danda'ama jedha MM Abiy Ahmad. | Oromia Shall be Free
bilisummaa March 30, 2020	Comments Off on Walitti ida’amuu qofaan Koroonaa moo’achuun danda’ama jedha MM Abiy Ahmad.
Posted by Abiy Ahmed Ali on Monday, March 30, 2020
Saayintistootnii fi Doktorootni garuu addaan fagaachuu qofaan Koraanaa moo’achuun danda’ama jechaa jiru. Saayintistootnii fi Doktorootni faallaa Abiy waan deemaniif diinomfate fakkaata. Osoo dura ofumaa dhaqee warra Koroonaan qabameen walitti ida’amee furmaata ta’uu nuu mirkaneessee ragaa qaba jenna. Amma garuu afaan qofaan waan dubbateef ragaan akka nuu mirkaneessu kabajaan isa gaafanna:)
Previous Dr.Milkeessaan buutame jira!
Next Adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warraaqsa dhalatanii galma hankaakan/hanqatan (1870 – 2020)